Vechidiki vakawanda vanoshandisa Apple Watch | Ndinobva mac
Pasina kupokana, iyo Apple Watch ndicho chishandiso chinofarirwa nevanhu vazhinji, nekuti chokwadi ndechekuti chinhu chinobatsira kwazvo pane dzimwe nguva. Zvino, vateereri veichi chishandiso vakanyanya kutarisa vakuru, vachifunga kuti vanogona kushandisa ese hutano mabasa ayo, pakati pezvimwe zvinhu.
Nekudaro, zvinoda kuziva kuti mune yazvino mushumo iyo yakagadziriswa pamusoro pekushandisa nhare mbozha muvachiri kuyaruka, tinogona kuona izvozvo, kuwedzera kune iyo iPhone, zvimwe zvishandiso zvakaita seApple Watch zvakare zvine zvakawanda zvekuvapo.
Uye ndezvekuti, sekuona kwedu pawebhusaiti ye Piper jaffray, pavane makore zviuru zvisere vechidiki vakaongororwa muUnited States, zvinoitika kuti 83% yavo iine iPhone, zvichienzaniswa ne9% vanova vashandisi veApple. Zvino, izvo zvinonyanya kukosha kwatiri iwo manhamba ane hukama neApple Watch, kubvira 20% yevashandisi ve iPhone vataurwa pamusoro apa vanotova neayo mamwe emawatch akangwara eApple.
Zvakare, sekunge izvi zvaive zvisina kukwana, a 23% yavo vakaratidza kuti vari kuronga kutenga imwe mumwedzi mitanhatu inotevera. Uye, zvine chekuita nemamwe mapuratifomu, kutaura kuti kushandiswa kwemawachi akangwara kwakakurawo kune Samsung, nekuti 2% yevechiri kuyaruka vane Wear kana Galaxy Watch, ichokwadi zvakare chekufunga.
Nenzira iyi, tinozviona izvo Apple iripo chaizvo munyika yevechiri kuyaruka, kana zvirinani muUnited StatesSezvo vazhinji vavo vatove vachishandisa akasiyana mafoni nharembozha yechiratidzo, uye zvinotarisirwa kuti izvi zvishoma nezvishoma zvichawedzera kufunga nezve "mukurumbira" uyo wakasikwa muchikamu chino. Nenzira imwecheteyo, zvinonakidzawo kutaura kuti pasocial network ainyanya kushandiswa nevechiri kuyaruka aive, zvichiteerana, Snapchat uye Instagram.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mumwe muvashanu vachiri kuyaruka ane iPhone zvakare ane Apple Watch